Profile - Tianhua transformer Co., Ltd.
35KV amandla transformer
Amorphous ingxubevange transformer
uhlobo Box transformer
Dry uhlobo transformer
S13-mrl triangle core sombane
Jiangsu Tianhua transformer Co. Ltd. Ingaba ishishini eliphezulu-zobugcisa ezizodwa ekuveliseni, uphuhliso kunye kwiintengiso abaguquli kunye neemveliso ezinxulumeneyo. Inkampani ibekwe kwisixeko yesibini ngobukhulu kweli phondo Jiangsu, wesizwe ebanzi yokuhamba hub, empumalanga China inzululwazi ebalulekileyo kunye nemfundo, inkcubeko, ezemali, ukhenketho, ukhathalelo lwempilo, indibano kunye neziko mboniso, uqoqosho, urhwebo kunye norhwebo neziko ezibalulekileyo kwiphondo Jiangsu, Xuzhou komzi, umzila kaloliwe Beijing-eShanghai kunye kaloliwe Longhai kule ezibalekayo, le icanda ibhulorho lizwekazi yaseYurophu Xuzhou, ukuthuthwa kuyinto elula kakhulu.
Olu tyalo-mali iyonke nkampani million 258 Yuan, nekomkhulu obhalisiweyo million 55 Yuan. Le nkampani iye abasebenzi 270, kuquka 7 engineers.More senior kwe 110 abasebenzi kwezobuchwephesha ezifana ugqirha kunye inkosi degree.Since nkampani yasekwa, ukulandela ngokungqongqo inkqubo yolawulo lomgangatho ISO9000 Kwaye ukunika abathengi kunye neemveliso Obusemagqabini ubunjani ezihlangabezana iimpawu ngalinye mmandla.
Siyasebenzisana umxumi wethu ubugcisa, izixhobo lokuqala-class, Obusemagqabini ubunjani, inkonzo encomekayo elihle, funani uphuhliso eqhelekileyo, ngokunyanisekileyo ukwamkela abantu bazo zonke iintlobo ukuba uthe wafika kwenye imfuduka yam ukuxoxa intsebenziswano, ukwenza brilliant!
Abathengi: ukubonelela abathengi kunye neemveliso zobungcali iinkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye nexabiso ubuninzi ukuphumelela abathengi 'ukuqonda, intlonipho kunye nenkxaso ngokunyaniseka namandla.
Abasebenzi: abasebenzi trust 'yemizamo kunye nokuzinikela, bayavuma abasebenzi babo impumelelo nokubonelela imbuyekezo esihambelanayo, kunye nokudala indawo yokusebenza elungileyo uphuhliso kubasebenzi babo.
Market: ukunciphisa iindleko zokuthenga kunye neengozi kubathengi, nokubonelela siqinisekiso lokwenene mali umthengi.
Development: usukelo uphuhliso oluzinzileyo nokwakha ukwaneliseka lwabathengi.
umoya Enterprise: ukuzithemba, ukuziphatha kakuhle, self-ukuzimela self-ukuphucuka.
On The uJobe
Ukususela mhla yasekwa, mveliso wethu uye ekuphuhliseni iimveliso iklasi yehlabathi yokuqala kunye kokulandela umgaqo
esemgangathweni kuqala. Iimveliso zethu ndizuze elihle kakhulu kushishino kunye valuabletrusty phakathi abathengi abatsha nabadala ..
105 Xuhai Road, uPhuhliso loQoqosho Xuzhou Zone Jiangsu China
Products Guide - iveliso ezifakiwe- Tags Hot - Sitemap.xml - AMP Mobile
Power Distribution Transformer 1000kva, umama 5000kva, oil transformer, Transformers Manufacturer, 1000 Kva Transformer With Price, 11kv Oil ukuntywiliselwa Power transformer ,